Banyere Anyị - Fujian Bailong Mkpịsị Manufacture Co., Ltd.
AHIL AKW .KWỌ nke e guzobere na 2003, nke bụ ụlọ ọrụ textile metụtara Research and Exploration, Production and Marketing. Anyị ipuiche n'elu-ọkwa lace maka lingerie, uwe ime na uwe.
Igwe arụmọrụ jacquard dị elu ma dị irè na akụrụngwa ịkwa akwa sitere na German Karl Mayer nwere ike iwepụta 100 laces kwa ọnwa, na-enyere anyị aka ịnabata iwu olu. Ruo ugbu a, ndị na-ese ihe nwere ọgụgụ isi enweela ihe karịrị ụdị 10,000 ị nwere ike ịhọrọ. Ka ọ dị ugbu a, na-aga n'ihu na-emeziwanye ogo ma mepụta 15 ọhụụ ọhụrụ na-eme kwa ọnwa iji gboo mkpa mgbanwe na mgbanwe ahịa.
Lọ ọrụ a nwere ọkachamara ahịa otu aku mba ọzọ ahia na kere n'elu 15 nde dollar uru nke exporting. Ọrụ kachasị mma na ọnụahịa kachasị mma na ụdị pụrụ iche nwere ogo dị elu na-eme ka ngwaahịa anyị gbasaa na Europe, South America, East-South Asia na Africa.
N'ịdabere na ụkpụrụ ọrụ "iguzosi ike n'ezi ihe, dabere na ọrụ", BAILONG LACE kwenyere na "Ime ihe n'eziokwu na-emekọ ihe ọnụ, imekọ ihe ọnụ na-eme ka amamiihe." Anyị actualize internationalization atụmatụ, ịmụta oge a management style, achịkọta talent si niile ubi, iru enterprise omenala. "Gbalịa ịbụ onye kachasị mma" bụ ụkpụrụ omume maka onye ọ bụla na-arụ ọrụ. BAILONG LACE na-ebido mwakpo ịghọ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na ikike mba ụwa.